Rosiana Aeroflot dia mandefa sidina mankany Seychelles
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Rosiana Aeroflot dia mandefa sidina mankany Seychelles
Ny serivisy an'habakabaka miaraka amin'i Seychelles dia nosokafana taorian'ny fanapahan-kevitry ny ivon-toeran'ny vonjy taitra maika hisorohana ny fanafarana sy ny fiparitahan'ny otrikaretina coronavirus vaovao ao amin'ny Federasiona Rosiana, ary ny fisokafan'ny mpizahatany, anisan'izany ny Rosiana, avy amin'ny manampahefana Seychelles.
Aeroflot dia hanomboka sidina mahazatra avy any Moskoa mankany Seychelles (Mahe Island), manomboka ny 2 aprily 2021
Afaka miditra tsy misy visa any Seychelles ny olom-pirenena rosiana, tsy misy fameperana
Ny mpitsidika rosiana dia takiana amin'ny fitsapana COVID-19 ratsy natao talohan'ny 72 ora talohan'ny niaingany ho any Seychelles
Hanomboka ny sidina miainga avy any Moskoa mankany Mahe, Seychelles, manomboka amin'ny 2 aprily, ny mpitatitra saina Aeroflot ao Rosia, hoy ny nambaran'ny kaompaniam-pitantanana
“Ny zotra dia hatao indray mandeha isan-kerinandro amin'ny zoma. Ny varotra tapakila dia efa nosokafana tamin'ny tranokalan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ” Aeroflot hoy izy.
"Ny fanokafana ny serivisy an'habakabaka amin'ny Seychelles dia nanjary azo natao taorian'ny fanapahan-kevitra mifandraika izay noraisin'ny ivotoerana valin'ny virus coronavirus ao amin'ny Federasiona Rosiana ary ny fisokafan'ny sisintany ho an'ireo mpizahatany, anisan'izany ny Rosiana, nataon'ny manampahefana Seychelles," hoy ny orinasa.
Russian Airlines, fantatra amin'ny anarana hoe Aeroflot, no mpitatitra saina sy zotram-piaramanidina lehibe indrindra an'ny Federasiona Rosiana. Niorina tamin'ny 1923 ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ka nahatonga an'i Aeroflot ho iray amin'ireo zotram-piaramanidina tranainy indrindra eto an-tany
Aeroflot dia manana foibe ao amin'ny Central Administrative Okrug, Moskoa, ary ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo International Airport. Ny sidina dia manidina amin'ny toerana 146 any amin'ny firenena 52, tsy manilika serivisy codeshared.